Chalet des Paysans .... ukuze ubalekele kukho konke! no296419 - I-Airbnb
Chalet des Paysans .... ukuze ubalekele kukho konke! no296419
Stratford, Quebec, i-Canada
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Valérie
Ikhona elincane lepharadesi, elitholakala ehlathini ogwini lweLake Thor Emalokishini Asempumalanga. Ngokwakhiwa kwayo okuyingqayizivele, le ndlu enhle yokhuni lomsedari, igumbi negumbi, isilungele ukudida izivakashi zayo ngokuzola nokusondela kwayo emvelweni… Ehlobo, yonke into ikhona! I-spa, isikebhe esihamba ngogesi, izinkuni zokubasa! Ebusika, indawo yokungena ayisuswa eqhweni, ukuhamba ngezinyawo kwe-snowshoe okungamamitha ayi-100 kuyadingeka futhi indawo ye-spa iyatholakala kusukela ngoMeyi kuya ku-Okthoba. Uma sekufudumele, indawo inomlingo!
Ukuze uthuthukise ukuhlala kwakho, izivakashi zinakho: 1-seater spa (kusukela ngoMeyi kuya ku-Okthoba) ama-kayak angu-2: 1 kabili kanye ne-1 eyodwa, isikebhe esigwedlwayo esinenjini kagesi engu-1 esizokwazi ukudoba kanye nesikebhe esinamasondo amabili. Ngaphezu kwalokho umhlaba unendlu encane esihlahleni okujabulisa ngayo izingane. Inombolo yepholisi: 296419
Itholakala enhliziyweni yehlathi, i-chalet iseyimizuzu emi-5 ukusuka endaweni yokudlela, ipaki yezingane, inkundla yethenisi kanye nemizuzu engama-20 ukusuka edolobheni elikhulu elinazo zonke izinsiza.
Agricultrice, mère de famille et voyageuse...J'aime découvrir des lieux prêts a me dépayser.
Kuhlale kungenzeka ukuthintana nathi ngocingo ngesikhathi sokuhlala kwakho. Sihlala sikhona ukuze sikwemukele ku-chalet futhi sikunikeze lonke ulwazi ukuze uhlale kahle.
Inombolo yepholisi: 296419
Hlola ezinye izinketho ezise- Stratford namaphethelo